Apple Yekuona Series 4 LTE muSpain | Ndinobva mac
Zviuru zvevashandisi muSpain vanga vakamirira kufamba uku kubva kuApple. Iyo Nhepfenyuro dzeApple 4 Ndiyo yekutanga Apple Watch kusvika kuSpain neLTE tekinoroji. Sezvo iwe ungatoziva kare, yekutanga Apple Watch neLTE tekinoroji yaive iyo Series 3 uye haina kumbosvika munyika medu, kusiya mamirioni avanhu vasina mukana wekuve nayo.
Hatizive kana izvi zvakaitika nekuda kwekushaikwa kwezvibvumirano nevashandisi veSpanish, zvinoita kunge zvatogadziriswa mushure megore refu neApple Watch Series 4.
Apple yatanga Keynote yanhasi nemudiki wemhuri, Apple Watch Series 4. Inopa yekufungidzira Apple Watch, iine maficha matsva, skrini nyowani yakavandudzwa uye ine 40mm ne44mm diagonals. Nekudaro, muchinyorwa chino tinoda kutaura newe nezve Iko kuwanikwa kwemhando dzakasiyana muSpain.
Iyo itsva Apple smartwatch ichave ichiwanikwa kubva munaGunyana 21, kunyangwe ivo vakataura kuti inogona kuchengetwa kubva munaGunyana 14, hongu, mumazuva maviri chete. Zvino, ruzivo rweSpain rwunouya neiyo LTE vhezheni uye inguva yekutanga kubva modhi iyi iripo kuti ichatengeswa kuSpain. Iyi vhezheni yeLTE Ichave iripo muSpain zvese paVodafone uye Orange.
Saka iwe unoziva, kana wanga wakamirira ino nguva yakareba, unogona kutoteerera kutanga kwenzvimbo, nekuti zvirokwazvo iyo LTE modhi iri kuzotengesa yakawanda.
Ramba uchifunga kuti iwe unogona kungoishandisa chete pasi peOrange kana Vodafone, saka hatizive kana zvimwe zvese zve Vashandisi vachakwanisa kuve neWatch mune imwe kambani uye iyo iPhone mune imwe.
MuSpain, chishandiso chichava nemutengo wekutanga wemakumi mana nemaviri euros uye iyo Apple Watch Series 429 inodonha kusvika 3 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pakupedzisira! Iyo Apple Watch Series 4 LTE inosvika kuSpain
Apple inosimbisa kuburitswa kweIOS 12 uye watchOS 5
Apple Inosvitsa iPhone Xs uye iPhone Xs Max